काठमाडौँ भित्रनेलाई १४ दिन होम क्वारेन्टिन अनिवार्य, नबसे कारवाही गर्न आदेश – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौँ भित्रनेलाई १४ दिन होम क्वारेन्टिन अनिवार्य, नबसे कारवाही गर्न आदेश
काठमाडाैं, १० असार । तपाईं सरकारले तोको मापदण्डअनुसार आफू बस्ने स्थानीय तहको अनुमतिसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालको पास लिएर काठमाडौँ आउनुभएको हो ? वा त्यस किसिमको प्रक्रिया पुर्याएर आउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यसरी आउँदा पनि अब तपाईंले १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ ।
गृहमन्त्रालयले यो व्यवस्था गराउन भन्दै मंगलबार उपत्यकाका तिनै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । पत्रमा नियमानुसार आवश्यक कारवाही गर्न पनि आदेश दिइएको छ । याे खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।